Mashandisiro Ekushandisa Twitter Kukurudzira Yako Ecommerce Bhizinesi | ECommerce nhau
Mashandisiro Ekushandisa Twitter Kukurudzira Yako Ecommerce Bhizinesi
Susana Maria Urbano Mateos | | evanhu vezvenhau
Unogona shandisa Twitter kusimudzira yako ecommerce bhizinesi, Asi zvisati zvaitika, unofanira kutanga waona zvaunoda kuzadzisa munhare iyi. Iwe haufanirwe kukanganwa izvozvo Twitter ine mutauro wayo neakavanzika nuances uye hashtag iwe yaunofanirwa kunzwisisa.
1 Mashandisiro aungaita Twitter kune yako Ecommerce
2 Basa remutengi
3 Chengetedza zvakanaka uye zvisina kunaka maTweets
4 Tsvagurudza yako yakanangwa musika
5 Wongorora makwikwi aya
Mashandisiro aungaita Twitter kune yako Ecommerce
Kunge zvese Ecommerce bhizinesi, iwe unofanirwa kutanga kufunga nezvazvo Twitter sekunyunyuta kwako uye nedhipatimendi rebasa revatengi. Kuti ubudirire, iwe unofanirwa kuve nechokwadi chekutarisa zvese zvinotaurwa zvechiratidzo chako pasocial network uye kupindura vatengi vane rakasarudzika sevhisi.
Chengetedza zvakanaka uye zvisina kunaka maTweets
Kana chiri Zvakanaka tweet, iwe unofanirwa kudzokorora, uye wotumira tweet zvakare nekutenda uchiratidza kugutsikana kwako neruzivo rwakanaka rwakawanikwa nemutengi. Kana chiri Negative tweet, usazvidzivise, gadzirisa dambudziko nekukasira uye upe mhinduro. Tora kubata kwako kweTwitter nenzira yaungatarisana nayo kumba, kuve nehunhu, kushinga, uye ushamwari.
Tsvagurudza yako yakanangwa musika
Iyi pasocial network yakanakira varidzi veecommerce vari kutsvaga kuwana ruzivo rwunovabvumidza kusimudzira mabhizinesi avo epamhepo. Kana bhizinesi rako richitengesa mabhasikoro emakomo, gadzira rimwe Tsvaga pa Twitter uchishandisa mazwi akakosha kutsvaga vashandisi vari kutaura nezvemabhasikoro emakomo. Iyo yakanyanya kuwedzera a mushandisi pa TwitterZvichiri nani, iwe unofanirwa zvakare kufunga nezvevashandisi avo, kunyangwe vangave nevateveri vashoma, vachiri vangangove vatengi.
Wongorora makwikwi aya
Zviri pachena kuti yako vakwikwidzi vave kutoshandisa Twitter uye nekudaro zviri nyore kuti iwe udzidze kubva kuzvinhu zvavari kuita nemazvo, pamwe nekutadza kwavo. Tsvaga kuti vanosimbisa sei kukosha kwavo, kuti mitengo yavo inofananidzwa neyako, izvo zvigadzirwa zvemifananidzo yavo uye tsananguro zvakaita, saiti yavo yakagadzirirwa nhare, nezvimwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » evanhu vezvenhau » Mashandisiro Ekushandisa Twitter Kukurudzira Yako Ecommerce Bhizinesi
Maitiro ekugadzirisa zvikamu muMagento kune zvirinani SEO Ecommerce